Ekweisi kacha mma nke 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Ụlọ Ignatius | | Foto na ụda, Ngwa agha
Ekeresimesi na-abịa, ma ọ bụ oge dị mma ịmalite ịchegharị maka ịmegharị otu ngwaọrụ elektrọnik anyị, nke na-anaghịzi eme dị ka ha mere na mbido, ma ọ bụ nke n'ime afọ, amalitela ịbụ akụkụ nke ụdị Devid agụghị ndị gbara. Ugbu a n'ahịa, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekweisi maka ihe masịrị na mkpa niile ma ọ bụrụ na anyị edoghị anya banyere ihe anyị chọrọ, mkpebi ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya.
Iji gbalịa inyere gị aka n'ọrụ a na-agwụ ike, anyị ga-achikota n'isiokwu a, nke bụ ekweisi kacha mma nke 2017, ebe anyị na-agaghị ekwu maka naanị ụdị ndị ruru ahịa na afọ niile, mana anyị ga-ekwukwa banyere ndị na-enye ego kachasị mma mana enwererịrịrịrị.
Nke mbụ, anyị ga-eburịrị n'uche ihe ga-abụ njedebe anyị ga-eji ekweisi anyị zubere ịzụta, ebe ọ bụ ihe nzuzu ịzụta ekweisi iji nụ ụtọ usoro anyị ma ọ bụ ihe nkiri anyị ma ọ bụ jiri supra- chọrọ ịpụ gaa egwuregwu ma ọ bụ gaa mgbatị ahụ. Ghara ime ka mkpebi ahụ sie ike nke ukwuu, anyị ga - ekewa ekweisi na Typesdị 3: ntị ntị, intraural, supraaural na / ma ọ bụ ntị.
1 Dị ekweisi
1.3 Ntughari / Ntughari ma obu Cicumaural
2 Ihe kacha mma Earbuds
3 Kacha mma Intraural ekweisi
3.1 Jay Bird X3
3.2 Bragi gbaara
3.3 Igwe Mkpịsị Ugwu Ike 6
3.4 Newskill Nix: Ntụziaka nke Editor
3.5 Intraural ọnụ
4 Igwe okwu Supraaural kacha elu / ntị
4.1 Igwe Teknụzụ ATX M50x
Earbuds bụ ekweisi anyị marala kemgbe anyị dị obere, ndị etinyere na ntị na na mbido mgbanwe anyị na-ada ma ọ bụrụ na anyị emee ngagharị ọ bụla na mberede. Earbuds nwere ọnụ ala dị ọnụ ala anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, na-ekewapụ anyị site na mkpọtụ na mpụga ya adịghị adịkarị mma.
Intraurals bụ ndị dabara n'ime ntị, na-ekewapụ onwe anyị obere site na mkpọtụ na mpụga nke ahụ na-enyekwa anyị nnukwu ido onwe anyị n'okpuru mmegharị. Nke a na ụdị ekweisi dị na a Wired ma ọ bụ Bluetooth version, ha bụ nnọọ ìhè na-anwapụ anyị iche na gburugburu ebe obibi. Ihe na-adịghị mma bụ na n'ozuzu ha anaghị enwe ahụ iru ala, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ iso ọtụtụ awa na-aga n'ihu na ha.
Ntughari / Ntughari ma obu Cicumaural
Igwe isi na-enweghị isi aghọwo ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị ọrụ, n'ihi eziokwu ahụ na na mgbakwunye na ịtọpụ anyị iche na ụda na-abụghị, ha nwere ahụ iru ala karịa ekwe ntị ntị na ha na-enye anyị karịa ezigbo bass n'ọtụtụ oge. N'ezie, a bịa n'ụgbọ njem ha, ha abụghị nhọrọ kachasị mma, ya mere a na-atụ aro ụdị ekweisi a maka iji n'ụlọ.
Igwe okwu ntị karịrị nke na-ekpuchi ntị, yabụ na-enye anyị iche iche site na mkpọtụ ndị gbara anyị gburugburu. Ogo nke ụdị ekweisi a, karịrị nke gara aga niile ha na-enyekwa anyị ụda kachasị dị elu nke anyị nwere ike ịchọta n'ụdị ngwaọrụ a. Dị ka Supraaurals, a gaghị ebugharị ekweisi ndị a site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ.
Ihe kacha mma Earbuds
AKG na-enyekwa ekweisi isi waya iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, ebe Y16A na-etinyekwa ya igwe okwu na-ejide akara ijikwa egwu egwu na mgbakwunye na oku. AKG Y16A nwere ọnụahịa na Amazon nke euro 24.
Zụta AKG Y16A
AirPods kwekọrọ na ngwaọrụ ọ bụla nwere njikọ Bluetooth, ọ bụghị naanị na ngwaahịa Apple. Nanị ụzọ nkwukọrịta na ngwaọrụ ahụ bụ ikuku, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere ama na-enweghị ụda isi okwu ma anyị chọrọ ịdị mma na nnukwu ego, Apple AirPods bụ nhọrọ magburu onwe ya. Anyị nwere ike ịchọta Apple AirPods na Amazon maka euro 170 ma ọ bụ ozugbo na Applelọ Ahịa Apple maka euro 179.
Zụta Apple AirPods
Kacha mma Intraural ekweisi
Firmlọ ọrụ Jaybird na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekwe ntị, n'etiti nke X3 pụtara, ihe atụ gafere aka anyị na nke ahụ anyị nyochara ọnwa ole na ole gara aga. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọnụahịa ha abụghị maka ndị niile na-ege ntị, ha bụ ụzọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ ahụ niile egwu egwuregwu ma ọ bụ gaa mgbatị ahụ yana egwu kachasị amasị gị nakwa na ha chọrọ nchekwa na ha agaghị ada n'oge ọ bụla, n'ihi usoro nkwụnye ọ na-ejikọ yana njikọta bluetooth. A na-ere ọnụahịa Jaybird X3 na euro 79 na Amazon.
Zụrụ Jaybird X3
Ọ bụ ezie na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ọ bụ Apple bụ onye malitere igwe ekweisi mbụ nke nwere igbe akpa nke na-enye ohere ịmegharị, ọ bụghị nke mbụ. Firmlọ ọrụ German Bragi malitere ọnwa ole na ole tupu Dash, ụfọdụ Na-eme mkpọtụ na-ege ntị na-eme maka egwuregwu, ọbụna soro ha saa ahụ. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ike ịkọwapụta ọrụ ahụ anyị na-arụ mgbe anyị na-aga eme egwuregwu so ha, yabụ na anyị agaghị ebu ekwentị ma ọ bụ mgbaaka na-echekwa iji tụọ. Bragi na-enye anyị ụdị dị iche iche n'ahịa, mana enwere ike ịchọta ọnụ ala karịa 146 euro na Amazon.
Igwe Mkpịsị Ugwu Ike 6
Spanishlọ ọrụ Spanish nke dị na Benidor, na-enye anyị ekweisi ikuku na Ezi Ikuku nka na ụzụ iji were nnwere onwe zuru oke na-enweghị njikọ, ekele maka awa ise nke nnwere onwe ọ na-enye anyị na nko mkpuchi ahụ na-etinye ha na ntị anyị. N'ihi bọtịnụ multifunction, anyị enweghị ike ijikwa egwu egwu nke ọkacha mmasị anyị, mana anyị nwekwara ike azịza oku ozugbo. Enery Sistem Earphones 6 nwere ọnụahịa na Amazon nke euro 50.
Zụrụ Ulo Oru Ume Ike nke Ugboro isii Ezi Ikuku
Newskill Nix: Ntụziaka nke Editor
Nix -enye gị ohere na-enwe elu àgwà ọdịyo ekele ya nkà na ụzụ nnukwu bass, ya mere ekweisi zuru oke ma maka ojiji na ụlọ yana maka ịga obodo. Na mgbakwunye, ha nwere a nnukwu ndidi na ọsụsọ na splashes, na-aghọ ọ bụghị naanị ngwaọrụ ọdịyo dị iche iche, kamakwa ihe niile. Ewoo! ma chefuo banyere ukwufu: na clamping usoro nke Nix na-enye ha ohere dabara n'ụzọ zuru oke na ntị site na iji rọba dị n'ọtụtụ nha ma ha dị oke ọkụ (naanị gram 15) ị gaghị achọpụta na ị na-eyi ha.
The Newskill Nix dị naanị na oji y Ha nwere ọnụahịa nke euro 39,95 ma dị site na ebe nrụọrụ weebụ Newskill, ebe anyị nwekwara ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa egwuregwu dị ka oke, tebụl, oche, oche, akwa na ọtụtụ ngwa.
Na Amazon anyị nwere ike ịchọta ekwe ntị na ntị site na euro 7, nke nwere ike gboo mkpa anyị n'ụzọ zuru oke, ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ ikewapụ onwe anyị pere mpe na mkpọtụ nke gbara anyị gburugburu ka anyị na-agbada n'okporo ámá ma ọ bụ na anyị nọ na nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ilele ụdị ngwaọrụ a na Amazon, naanị ị ga-aga site na njikọ ndị a.
Igwe okwu Supraaural kacha elu / ntị
Igwe Teknụzụ ATX M50x
The Audio Technica ATX M50X bụ otu nke ụdị na uru kachasị mma maka ego anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, obughi nani maka odiyo okwu a, kamakwa maka mmeghari nke pad ahu n’enye anyi. Ha na-enye anyị eriri dị iche iche a na-agbanwe agbanwe mana ọ nweghị nke ga-ekwe ka anyị tinye eriri iji chịkwaa ọkpụkpọ ma ọ bụ tinye igwe okwu iji zaa oku. Site na ọnụego a gbanwere nke euro 139 na Amazon, ha ghọrọ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmegharị ekweisi gị ma chọọ ịzụta ihe nlereanya naanị iji gee egwu ma ghara iji ekwentị gị.
Zuta Igwe Technica ATH-M50x
Anyị nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla ikwu banyere ụlọ ọrụ AKG na ogo ngwaahịa ya. Ndị K550 MKII bụ ekweisi nwere eriri dị gram 386 nke na-etinye usoro nkwụsịtụ mkpọtụ, ha na-enwe ike ịpịgharị iji nwee ike ibufe ha n'ụzọ kachasị mma ma ha na-emegharị ka ọ bụrụ nha ọ bụla, yabụ na enweghị oge ike gwụrụ anyị iyi ha. A na-ere AKG K550 MKII na euro 156 na Amazon
Jdị JBL E50 na-enye anyị njikọ ikuku Site na njikọ bluetooth nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, ọ bụ ezie na ha na-enyekwa anyị ohere ijikọ ha site na 3,5 mm jack, ha nwere nnwere onwe nke awa 16, ha na-etinye igwe okwu iji kpọọ ma ọ bụ nata oku ma ọ na-enye anyị ụdị igwe dị iche iche. na ike siri ike na akparaghị oke mma. JBL E50 BT nwere ọnụahịa na Amazon nke euro 111.
Zụta JBL E50 BT
A maara Bose mgbe niile maka ịnye ezigbo ụda dị mma na ngwaọrụ ya niile na Bose QuiteComfort 35 bụ ihe atụ doro anya nke a. N'agbanyeghị oke ha, ha dị ọkụ karịa ekweisi ndị ọzọ n'otu ụdị ahụ, enwere ike apịaji ha ibufe na ọnọdụ dị mma. Ha nwere usoro ịkagbu mkpọtụ, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ihe kachasị mma na ahịa. Na mgbakwunye na ịnye anyị njikọta Bluetooth, ọ na-enye anyị nhọrọ jiri ha jiri njikọ njikọ Jack 3,5 mm. Bose QuietComfort 35 dị na Amazon maka euro 299.
Zụrụ Bose QuietComfort 35
Shennheiser si PXC 550 na-enye anyị a usoro ịkagbu mkpọtụ yiri nnọọ ihe anyị nwere ike ịchọta na Bose QuietComfort. Site na ịdị arọ nke naanị gram 22, njikọta Bluetooth yana nkasi obi magburu onwe ya, ihe nlere a bụ ihe ọzọ magburu onwe ya n'ime ekweisi ntị, ma ị ga-enwe ọ moviesụ na fim ma ọ bụ egwu anyị kachasị amasị anyị na-enweghị nsogbu gburugburu ebe obibi. Na Amazon anyị nwere ike ịchọta Sennheiser PXC550 maka euro 265.
Zụrụ Sennheiser PXC550
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ekweisi kachasị mma nke 2017
Capcom na-eme ememe ncheta afọ 30 nke ndị agha Street site na ịhapụ mkpokọta zuru ezu